मेलबर्नका नेपालीको दशैं : घरभित्रै वा दुई परिवारका १० जनासम्म पार्कमा ? « MNTVONLINE.COM
मेलबर्नका नेपालीको दशैं : घरभित्रै वा दुई परिवारका १० जनासम्म पार्कमा ?
मेलबर्न, भिक्टोरिया ।
आज आईतबार धेरैले कम्तिमा एउटा परिवारसम्म भएपनि अर्को घरमा भ्रमण गर्न पाउनेगरी लकडाउनका नियमहरु खुकुलो बनाउने अपेक्षा गरेका थिए । यसले आउँदै गरेको दशैंमा केही थप खुशी ल्याउने आशा मेलबर्नका नेपालीहरुको थियो । तर, प्रिमियर डेनियल एन्ड्रयूले गरेको घोषणामा घरमा पाहुना आउन नपाउने भएपछि नेपालीहरुको दशैं भर्चुअलमै बित्ने वा दुई परिवारका १० जनासम्म नजिकैको पार्कमा भेला भएर टीका लगाउनुपर्ने भएको छ ।
नयाँ नियम अनुसार २५ किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न पाइनेछ भने दुई परिवारका १० जनासम्म भेला हुन पाउने नियम छ । यस्तो भेटका लागि समयावधि तोकिएको छैन । यसअघि २ घण्टासम्म मात्रै दुई परिवारका ५ जना भेट हुने नियम थियो ।
नवरात्र सुरु भएपछि नेप्लीज मल्टिकल्चरल सेन्टर, न्याभ र एनआरएनले भर्चुअल आरति, भर्चुअल सामूहिक पूजाको अभ्यास गरिरहेका छन् । “यस पटकको दशैं पनि मेलबर्नवासीका लागि भर्चुअल नै हुने देख्छु म । तर, दुई परिवार नजिकैको पार्कमा भेला हुन सक्ने कुराले केही खुशी भने थपेको छ ।” न्याभका पूर्वअध्यक्ष तारा गैरेले एमएनटीभीसँग भने “पाकैमै भेट्दा पनि अत्यधिक सावधानी अपनाउन भने भुल्न हुँदैन ।”
७१ वर्षको उमेरमा माैरीपालनबाट वार्षिक १० लाख कमाइ
मेलबर्नको सडकमा तीन महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने ४० वर्षीय व्यक्ति पक्राउ !
माछापालन गर्ने किसानलाई अनुदानमार्फत पोखरी निर्माण गरिदिने
सुन किन्ने सोँचमा हुनुहुन्छ ? यस्तो छ आजको बजार भाउ
नोकियाले पायो चन्द्रमामा फोरजी जडान गर्ने जिम्मा
भिक्टोरिया कोरोना अपडेट : २४ घण्टामा एकजनामा मात्र नयाँ संक्रमण !
भिक्टोरियामा असामान्य एउटा कोरोनाको केश, दोश्रो पटक संक्रमित भएको पहिलो घटना हुनसक्ने !
अष्ट्रेलियाको न्यूसाउथवेल्समा कोरोना संक्रमण शून्य, विवाहमा ३ सय जनासम्म सहभागी हुन पाउने
मेलबर्नको सडकमा तीन युवतीमाथि यौन दुव्र्यवहार, पीडक खोज्दै प्रहरी !